Amazwe anabantu abaningi emhlabeni | Izindaba Zokuhamba
Amazwe anabantu abaningi emhlabeni
UMariela Carril | | General, Izaziso
Kulezi zikhathi zobhadane sikhumbula inani elikhulu labantu abahlala emhlabeni wethu. Bekungahlali kunje, kepha emakhulwini eminyaka amuva le inani labantu emhlabeni wonke ikhulile okuningi futhi lokho kuletha izinselelo ezinkulu.
Amazwe anabantu abaningi emhlabeni yiChina, India, United States, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Russia neMexico.. Izinselelo ababhekene nazo ziphathelene nokuhlinzeka ngemfundo, ezempilo nokusebenza kubo bonke. Futhi akulula kangako. Ingabe izwe elikhulu liyizwe elinabantu abaningi?
1 Amazwe nabantu
Umuntu angacabanga, cishe ngokwemvelo, ukuthi izwe elikhudlwana, abantu abaningi bahlala kulo. Iphutha lokuqala. Ubukhulu bezwe abuhlobene nenani labahlali noma inani labantu. Ngakho-ke, sinamazwe amakhulu njengeMongolia, iNamibia noma i-Australia enabantu abaphansi kakhulu. Isibonelo, eMongolia kunabantu abahlala ku-2.08 kuphela ngekhilomitha-skwele (inani labantu lilonke liyizigidi ezingama-3.255.000).
Kwenzeka okufanayo nasezingeni lezwekazi. I-Afrika inkulu kodwa ihlala abantu abayi-1.2 billion kuphela. Eqinisweni, uma wenza uhlu lwamazwe aphansi kakhulu, uthola ukuthi kukhona okungenani amazwe ayishumi ase-Afrika anabantu abaphansi. Kubangelwa yini? Kahle i-geography. Izingwadule zinwebeka lapha nalaphaya futhi zenze ukusatshalaliswa kwabantu kungenzeki. ISahara, uma kunesidingo, yenza cishe yonke iLibya noma iMauritania ibe yincithakalo. Kunjalo noGwadule iNamib noma iKalahari, eningizimu eningizimu.
INamib ithatha cishe lonke ugu lwaseNamibia kanti iKalahari nayo ithatha ingxenye yendawo yayo futhi cishe nayo yonke iBotswana. Noma, ngokuqhubeka nezibonelo, INorth Korea ne-Australia banenani elifanayo labantu: cishe izigidi ezingama-26, kodwa ... i-Australia inomhlaba omkhulu ngokuphindwe izikhathi ezingama-63. Kwenzeka okufanayo naseBangladesh naseRussia abantu babo abayi-145 no-163 wezigidi ngokulandelana, kepha iqiniso ukuthi inani labantu eRussia liphansi kakhulu.
Ngakho-ke ake sikwenze kucace lapho abukho ubudlelwano obuyimpoqo phakathi kobukhulu bezwe kanye nenani labantu abahlala kulo. Kepha nalu uhlu lwe- amazwe ama-5 anabantu abaningi emhlabeni.
Ngisakhumbula ukuthi eminyakeni embalwa eyedlule ngangibhala ngeChina ngenkathi uhulumeni enza ukubalwa kwabantu. Ngenkathi kwamanye amazwe lo msebenzi uqedwa ngosuku olulodwa, u-yebo onzima, kepha ekugcineni, lapha uthathe izinsuku ezimbalwa. Namuhla iChina inabantu abangu-1.439.323.776 XNUMX. Eminyakeni engamashumi amabili edlule yayincane kancane, inabantu abangaba ngu-1.268.300 13.4. Ikhule ngokwesilinganiso esingu-XNUMX% kula mashumi amabili eminyaka, noma kunjalo kulindeleke ukuthi ngo-2050 yehle kancane futhi iphakathi nendawo kwalezi zibalo ezimbili.
Njengoba sishilo ngenhla inselelo enkulu kahulumeni waseChina ukuhlinzeka ngemfundo, izindlu, ezempilo kanye nomsebenzi kubo bonke. Ngabe amaShayina ahlala kahle esatshalaliswa kuyo yonke insimu? Hhayi, iningi lihlala engxenyeni esempumalanga yezwe futhi kuphela eBeijing, inhlokodolobha, kunabantu abayizigidi eziyi-15 nohhafu. Inhlokodolobha ilandelwa yiShanghai, Guangzhou, Shenzhen, Chongqinh neWuhan, idolobha elidume kabi lapho iCovid-19 ivele khona.
Imininingwane ethakazelisa kakhulu ngabantu baseChina yilokho izinga lokukhula kwabantu lingu-0,37% (Kukhona ukuzalwa okungu-12.2 kwabakhileyo abayinkulungwane nokufa kwabantu abayisishiyagalombili). Isikhathi sokuphila lapha yiminyaka engama-75.8. Masikhumbule ukuthi ngo-1975 i Inqubomgomo eyodwa Yezingane njengesinyathelo sokulawula ukukhula kwabantu (ukuvimbela inzalo nokukhipha isisu ngokusemthethweni), futhi lokho kube yimpumelelo impela. Isikhathi esithile manje, isilinganiso siye saxegiswa ngaphansi kwezimo ezithile.
Izwe lesibili elinabantu abaningi emhlabeni yiNdiya ne Izakhamuzi eziyi-1.343.330.000. Abantu bahlala basatshalaliswa kulo lonke izwe, ngaphandle kwezintaba ezisenyakatho nasemagwadule asenyakatho-ntshonalanga. I-India inamakhilomitha-skwele angama-2.973.190 wobuso kanti eNew Delhi kuphela kunezakhamizi ezingama-22.654 1.25. Izinga lokukhula kwabantu lingu-XNUMX% kanti izinga lokuzalwa ngu- Ukuzalwa okungu-19.89 kubantu abayizinkulungwane. Isikhathi sokuphila asilutho Iminyaka ye-67.8.
Amadolobha amakhulu kunawo wonke eNdiya yiMumbai enezigidi ezingaba ngu-20, iCalcutta enezingu-14.400, iChennai, iBangalore neHyderabad.
Kunomehluko omkhulu phakathi kwenani labantu eliphelele elisesikhundleni sokuqala nesesibili nalesi sesithathu. I-United States iyizwe elinabantu abaningi kodwa hhayi kangako. Inabantu abayizinkulungwane ezingama-328.677 kanti iningi ligxile kakhulu ogwini olusempumalanga nasentshonalanga.
Izinga lokukhula lingu-0.77% kuphela futhi izinga lokuzalwa liyi-13.42 kubantu abayizinkulungwane. Amadolobha amakhulu kuleli zwe yiNew York lapho kuhlala khona abantu abayizigidi eziyi-8 nohhafu, iLos Angeles cishe nengxenye, iChicago, iHouston nePhiladelphia. Isikhathi sokuphila siyiminyaka engama-88.6.
Ubuwazi ukuthi i-Indonesia yizwe elinabantu abaningi kakhulu? Bahlala kuwo Abantu abangu-268.074. Kubuye futhi idolobha elinabantu abaningi kakhulu emhlabeni: iJava. Insimu yase-Indonesia ingamakhilomitha-skwele ayi-1.811.831. Izinga lokuzalwa ngabantu abangu-17.04 abazalwa ngabantu abayinkulungwane futhi isikhathi sokuphila iminyaka engama-72.17.
Amadolobha anabantu abaningi kakhulu, ngaphezu kweJava, yiSurabaya, iBandung, iMedan, iSemarang nePalembang. Khumbula lokho I-Indonesia iyisiqhingi e-Southeast Asia. Kuneziqhingi ezingaba yizinkulungwane eziyi-17, izinkulungwane eziyisithupha ezihlala abantu, ezungeze inkabazwe. Iziqhingi ezinkulu kunazo zonke yiSumatra, Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, iziqhingi zaseNusa Tenggara, iMolucca. I-West Papua nengxenye esentshonalanga yeNew Guinea.
Kukhona elinye izwe laseMelika kule 5 ephezulu yamazwe anabantu abaningi emhlabeni futhi yiBrazil. Inabantu abayizigidi ezingama-210.233.000 futhi iningi labo lihlala ogwini loLwandle i-Atlantic ngoba ingxenye enhle yale ndawo iyihlathi.
Insimu yaseBrazil inamakhilomitha-skwele angama-8.456.511. Izinga lokuzalwa ngu Ukuzalwa okungu-17.48 kubantu abayinkulungwane kanye nesikhathi sokuphila iminyaka 72. Amadolobha amakhulu kuleli lizwe yiSão Paulo, iRio de Janeiro, iSalvador, iBelo Horizonte, iRecife nePorto Alegre. IBrazil inkulu futhi ihlanganisa ingxenye enhle yeNingizimu Melika. Empeleni yizwe elikhulu kunawo wonke kuleli zwekazi.
Lawa angamazwe ayi-5 anabantu abaningi emhlabeni, kepha kulandele iPakistan, iNigeria, iBangladesh, iRussia neMexico. Okunye futhi ohlwini kukhona iJapan, Philippines, Ethiopia, Egypt, Vietnam, Congo, Germany, Iran, Turkey, France, Thailand, United Kingdom, Italy, South Africa, Tanzania, Myanmar, South Korea, Spain, Colombia, Argentina, Algeria, I-Ukraine…
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Amazwe anabantu abaningi emhlabeni
Okuhamba phambili kwePortugal
Amadolobha amakhulu aseYurophu okufanele uwavakashele